January 22, 2020 - Myan News
မီနာမီနို၊ ကော်တင်ညိုနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေပါပါတဲ့ လီဗာပူး ညနေခင်းသတင်းများ
လီဗာပူးအသင်းသားတွေ လီဗာပူးမြို့ထဲ စီတန်းလှည့်လည်မှုစဉ် ပရိသတ်တွေက မီနာမီနိုကို လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး ရှက်ရွံ့နေတဲ့ မီနာမီနိုက ပရိသတ်တွေကို ရင်မဆိုင်ရဲပဲ ရှေ့ဆက်သွားရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ မာနေးက မီနာမီနိုအား ဆွဲခေါ်ကာ ပရိသတ်တွေ ရှေ့ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ပ်က ပွဲနေ့တွေမှာ အားကစားဝတ်စုံပဲ အမြဲတမ်း ဝတ်ဆင်တဲ့ အကြောင်းကို ” ကျနော် ဒေါ့မွန်မှာတုန်းက အစောပိုင်း အပတ်တွေမှာ ဂျင်းနဲ့ တီရှပ် အနက်တွေ ဝတ်ပါသေးတယ်။ အဲ့နောက်တော့ ယူလာဖို့ မေ့နေခဲ့တယ် အဲ့တာနဲ့ နောက်ပိုင်း အသင်းက… Continue Reading →
အနာဂတ်မှာ မန်နေဂျာလုပ်နိုင်တဲ့ လီဗာပူးအသင်းသား လေးဦးနဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကြောင်း ကလော့ပ် ထုတ်ပြော
ဒီကနေ့ စကိုင်းစပေါ့မှာ ယာဂင်ကလော့ပ်နဲ့ အင်တာဗျူးရှည်တစ်ခု တက်လာပါတယ်။ အဲ့ထဲက အကြောင်းတစ်ချိုက ကျနေ်ာတို့ ဖော်ပြပြီးဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ့် အချက် နှစ်ချက်လောက်ကို အရင်ဆုံး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ မန်နေဂျာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ခင်ဗျား အသင်းသားက ဘယ်သူလဲ? ဘာကြောင့်လဲ? သူတို့ လုပ်လိုမလားဆိုတာတော့ ကျနော် မသိပါဘူး ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ကောင်လေးတွေက အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်လက်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ မီလီ၊ ဟန်ဒို၊ အဒမ်တို့က ဖြစ်နိုင်တယ်။ မန်နေဂျာလုပ်လိုတယ်ဆိုရင် ဂီနီကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတွေထဲမှာတော့ ရိုဘိုနဲ့ ထရန့်တို့ပေါ့ ဒါပေမယ့်… Continue Reading →
ဒီကနေ့မနက် လီဗာပူးလေ့ကျင့်ရေးမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ သတင်းကောင်းဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စ
ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ယူပြီးနောက်မှာ ထူးထူးခြားခြား ကိစ္စတွေအဖြစ် လီဗာပူးဟာ အမှတ်ပေးဖလားကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လက်တစ်ကမ်းအကွာကို ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ရှာကွီရီကို ဥရောပကလပ်နှစ်သင်းက ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆန်ခြင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာ ဖာဘင်ညို လူစားဝင်လာခဲ့တာက ချန်ပီယံလိဂ် ရံှူးထွက်အဆင့်တွေ ပြန်ကစားရဖို့ နီးစပ်လာတဲ့ ကလပ်အသင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီး မာတစ်နဲ့ မီနာမီနိုတို့ကလည်း အရန်ခုံမှာ ရှိနေခဲ့ကြတာက အားရစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက် လေ့ကျင့်ရေးမှာတော့ လီဗာပူးအသင်းသားတွေကို ရှာကွီရီကလွဲလို့ စုံစုံလင်လင် ပြန်တွေ့ခဲ့ရတာကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ သတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ရေးမှာ မီလ်နာ၊… Continue Reading →
ဆာလက် သွင်းဂိုးကြောင့် ပျော်စရာအမှတ်တရ ဆင်တူအဖြစ်ကို ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မူှးဟောင်း
ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲမှာ မိုဟာမက် ဆာလက်ရဲ့ ပွဲပြီးခါနီး သွင်းဂိုးကြောင်း လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ အရူးအမူး ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသလို ဆင်တူ အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုလည်း အမှတ်ရသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန်ရဲ့ တိကျတဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဆာလက် တစ်ကိုယ်တော် ထိုးဖောက် ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာက ယူနိုက်တက်ဘက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဂိုးသမား ရေနာနဲ့ တိုက်စစ်မှူး အန်ဂေါ့တို့ သွင်းဂိုးကို သတိရသွားစေခဲ့တာပါ။ ထိုပွဲမှာလည်း လီဗာပူးက ၂-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုး အပြီး အောင်ပွဲခံမှုတွေမှာလည်း… Continue Reading →
ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်တွေရှေ့ ဂိုးသွင်းရတာကို ပိုကြိုက်တဲ့ လီဗာပူးအသင်းသားများ
အခုပြောပြလိုတာကတော့ ပုံမှန် မြင်တွေ့နေကျ မဟုတ်တဲ့ လီဗာပူးအသင်းသားတွေရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုကို တယ်လီဂရပ်က ဖော်ပြလာတဲ့ စစ်တမ်းဟား ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေဟာ အဝေးကွင်းထက်စာရင် အိမ်ကွင်းမှာ ရလဒ်တွေ ပိုကောင်းတတ်ပြီး အိမ်ကွင်းဆိုရင် ဂိုးတွေလည်း ပိုမို သွင်းယူလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသင်းကြီးတွေဟာ အဝေးကွင်းပွဲတွေ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါ ရလဒ်မကောင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေက ကိုယ်အသင်း ပရိသတ် အများစုရှိရာ ပွဲကြည့်စင်တွေမှာ ဂိုးတွေ ပိုသွင်းနိုင်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကး ကိုယ်ကို… Continue Reading →
ဆောင်းပါး | ယာဂင်ကလော့ပ် ထပ်ဖန်တလဲလဲ ပြောနေပေမယ့် ဘယ်သူကမှ ဂရုမစိုက်တဲ့ ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်
လီဗာပူးမန်နေဂျာ ယာဂင်ကလော့ပ်က ပွဲစဉ်ဇယားနဲ့ ပက်သက်ပြီး အက်ဖ်အေနဲ့တကွ အင်္ဂလန်က တာဝန်ရှိသူတွေကို အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တွန်းစကား ပြောဆိုပေမယ့် မည်သူကမှ ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး။ မော်ဒန်ခေတ်မှာ ပွဲစဉ်ဇယားတွေကို ရေးဆွဲမှုတွေကို မန်နေဂျာတွေက ပါဝင်ရခြင်းမရှိပဲ ကလပ်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်တွေ၊ ပိုင်ရှင်တွေက ပြည်တွင်းပွဲစဉ်ဇယား ရေးဆွဲမှုတွေမှာ အဓိက ပါဝင်ကြရသူတွေဖြစ်တယ်။ ယာဂင်ကောလ့ပ်က ပွဲတွေကို ပိုနည်းသည်ထက် နည်းဖို့ပဲ စီမံပေးဖို့ကို တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ ကလော့ပ်က ” တစ်နှစ်လုံး ပြိုင်ပွဲ မရှိဖို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲ့တာက အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ငွေကြေးတွေပါလာတယ်။… Continue Reading →
လီဗာပူးဟာ တီမိုဝါနာကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်မှုတွေအား အခြားသော ဥရောပပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အပြိုင် ပြုလုပ်နေပေမယ့် ဇန်နဝါရီမှာတော့ ခေါ်ယူမှာ မဟုတ်ကြောင်း စကိုင်းစပေါ့က ဖော်ပြသွားပါတယ်။ ဂျာမနီတိုက်စစ်သမားရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေထဲက လီဗာပူးနဲ့ ချယ်ဆီးဟာ အခြားသော ဥရောပအသင်းတွေလို စောင့်ကြည့်မှုတွေ လုပ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကောင်းတဲ့ သတင်းက လီဗာပူးဟာ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ရလောက်အောင် တက်ကြွနေမှုတွေ မရှိဘူးလို့ သိရတယ်။ ဂျာမနီမှာ လီဗာပူးက ဝါနာကို ခေါ်ယူလိုသလို ဝါနာက လီဗာပူးကို ပြောင်းလာလိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ အတော်လေးကို ကျယ်ပြန့်နေပေမယ့်… Continue Reading →
ထိပ်တိုက်တွေ့ဦးမယ့် ဆာလက်နဲ့ အူဘာ၊ ခရာဘီလေ့ကျင့်ရေးကွင်းသစ်နဲ့ လီဗာပူး နံနက်ခင်းသတင်းများ
ဒဏ်ရာကြောင့် သီတင်းပတ် ၆ ပတ်လောက် ကွင်းဘေးမှာ နေခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူး ခံစစ်မှူး ဒီဂျန် လိုဗရန်က အသင်းနဲ့ အတူ လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်ဆင်းနေပြီ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂါနေ့ ထရိန်နင်က ဓာတ်ပုံနဲ့ အတူ ပြန်ပါဝင်ခွင့်ရတာ ပျော်ရွှင်ကြောင်း အင်စတာဂရမ်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူး မိုဆာလက်နဲ့ အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီးယန်းတို့ဟာ နိုင်ငံအသင်းတွေနဲ့ အတူ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ကစားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အီဂျစ်အသင်းနဲ့ ဂါဘွန်အသင်းတို့ဟာ ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲများ မဲခွဲမှုမှာ တစ်အုပ်စုတည်း… Continue Reading →